Mgbanwe: Nkwado Ngwaahịa Dị Mkpa na Ọdịnaya | Martech Zone
Enwere ụwa afọ ojuju n'ebe ahụ na-eto kwa ụbọchị. Ọtụtụ n'ime usoro ịzụ ahịa ngwaahịa a bụ iji nweta ụfọdụ nyocha ngwaahịa kesara na weebụ niile, dọta ndị na-agụ ya na peeji nke ngwaahịa wee pịa onye na-agụ ya ka ọ gbanwee. Egwuregwu ecommerce nke Sophia Ambience ™ na-etinye ihe oyiyi ngwaahịa yana nkwanye n'ime ọdịnaya ahụ - kachasị maka ilele ma dịkwa mkpa maka ọdịnaya a tụlere. Nke a na-eme ka ọnụ ọgụgụ ntụgharị dị elu karịa na saịtị Sophia.
Ambiance ™ bụ wijetị e-commerce nke na-anọdụ ala n'enweghị nsogbu n'akụkụ ọdịnaya ndị na-ebipụta akwụkwọ iji gosipụta ngwa ahịa dị mkpa nke ndị na-agụ ya na-akpaghị aka mgbe ha na-agagharị. Site n'ime ka ọdịnaya dị mfe, ọ na-enye ụzọ nkwụnye ego maka ndị na-ebipụta akwụkwọ yana n'ihi na ngwaahịa ndị ahụ mejupụtara ọdịnaya dị nso, ndị na-agụ akwụkwọ na-etinye aka na-eduga ozugbo na-eduga n'ịdabere na saịtị ahụ na ntụkwasị obi ka ukwuu.
Nke a bụ ihe na-akpali akpali na web, na-ejikọ ahụmịhe nke ibe ngwaahịa na saịtị ịzụ ahịa na ozi na gburugburu nke ọdịnaya dị ukwuu. Ndị nkwusa na-ede nnukwu ọdịnaya nwere ike ịkọwa ya karịa. Na saịtị ecommerce nwere ngwaahịa ha nwere olile anya ịkwalite n'ofe saịtị mbipụta ugbu a nwere ohere iji hụ ma hụkwa ngwaahịa ha.
Tags: ndị mgbasa oziobiịzụ ahịa nwere ọdịnayangwa ahia e-commerceNgwaọrụ ecommerceNkwado ngwaahịandị nkwusaSophia